आयुष्मान भवः- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
बलिउडमा आयुष्मान खुरानाका फिल्म एकपछि अर्को गर्दै किन हिट भइरहेका छन् त ?
भाद्र १३, २०७६ हेलो शुक्रबार
केही दिनअघि एक भारतीय फिल्म समीक्षकले लेखे, ‘पछिल्ला दिनमा अजय देवगन र अक्षय कुमारले खेलेका फिल्म भन्नासाथ मलाई झुर कमेडी वा फाल्तुको राष्ट्रवादी फिल्म भन्ने लाग्छ  । ’
उनले यो भनाइलाई यसरी पूरा गरे, ‘तर, आयुष्मान खुरानाले खेलेको फिल्म भन्नासाथ पक्कै राम्रो होला भन्ने लाग्छ । यो समयमा आयुष्मान राम्रो फिल्मको ग्यारेन्टी भएका छन् ।’
यो भनाइ काफी छ– आयुष्मानबारे बुझाउन । हुन पनि उनले फिल्म नै त्यस्तै खेलेका छन् । एकसे एक । गत दुई वर्षकै फिल्म हेरौं– आर्टिकल १५, बधाई हो, अन्धाधुन, शुभ मंगल सावधान, बरेलीकी बर्फी । सब हिट । सब शानदार । सबै फरक विषयका । जवान छोराका बाबुआमाले फेरि बच्चा जन्माउने भएपछि त्यो जवान छोराको जीवनमा के कस्तो असर पर्ला ? यस विषयमा थियो, ‘बधाई हो ।’ दलितमाथि भइरहेका अत्याचारको बयान गर्ने ‘आर्टिकल १५’, दृष्टिविहीनको अभिनय गरिरहेको एउटा संगीतकार/गायकको संघर्ष गाथा ‘अन्धाधुन’, एउटा यौन समस्याले ग्रसित युवाको मनोविज्ञानमा आधारित ‘शुभ मंगल सावधान’ र सानो सहरको एउटा कविको प्रेमकथा ‘बरेलीकी बर्फी’ । सबै आम मानिसका कथा तर खास तरिकाले बनाइएका ।
आयुष्मानले आफ्नो पहिलो फिल्म ‘विक्की डोनर’ बाट नै आफ्नो फरक बाटोको संकेत गरेका थिए । धेरै अभिनेताले अस्वीकार गरेको वीर्यदाताको भूमिकामा उनले आफूलाई अब्बल सावित गरेका थिए । टीभी एंकरका रूपमा करिअर सुरु गरेका आयुष्मानले यसै फिल्मबाट आफूलाई राम्रो गायक पनि सावित गरेका थिए । त्यसलगत्तै भूमि पेडनेकरसँग उनको ‘दम लगा के हैसा’ ले पनि आयुष्मानलाई ‘डेरिङ’ अभिनेता बनाइदिएको थियो । एउटा कलाकारका लागि आफैंलाई चुनौती हुने भूमिकाहरूमा देखिनु आवश्यक हुन्छ । जुन फिल्ममा पनि उस्तै देखिन थाले भने ती कलाकारको समय र प्रतिभा सकिएको मानिन्छ ।
आयुष्मानले आफूलाई त्यसबाट जोगाइरहेका छन् । विक्की कौशल र राजकुमार रावजस्ता नयाँ छिमलका अभिनेतासँग कुममा कुम मिलाएर उनले बलिउडमा एउटा बीचको बाटो बनाइरहेका छन् । राजकुमारसँग उनले ‘बरेलीकी बर्फी’ मा अभिनय गरे भने विक्कीसँग उनले यस वर्ष संयुक्त रूपमा उत्कृष्ट अभिनेताको नेसनल अवार्ड पाए । आयुष्मानले ‘अन्धाधुन’ र विक्कीले ‘उरी’ का लागि यो पुरस्कार पाएका थिए । आयुष्मानका दुई वर्षमा आउने फिल्मको सूची पनि उत्तिकै तगडा छ । उनी सबभन्दा पहिले ‘ड्रिम गर्ल’ मा देखिने छन् । यो फिल्ममा उनी युवतीको भेष र आवाजमा धेरै पुरुषलाई प्रेम पासमा पार्ने छलीको भूमिकामा छन् । त्यसलगत्तै उनको नयाँ फिल्म ‘बाला’ मा देखिने छन् । गत वर्षको हिट फिल्म ‘स्त्री’ का निर्देशक अमर कौशिकको यो ब्ल्याक कमेडीमा उनी कपाल खुइलिँदै गएर समस्यामा परेका युवाको भूमिकामा देखिने छन् । सोमबार मात्रै यसको पहिलो टिजर सार्वजनिक गरिएको छ ।
स्त्रीलगत्तै उनी अमिताभ बच्चनसँग ‘गुलाबो सिताबो’ मा देखिने छन् । सन् २०२० को अप्रिलमा रिलिज हुने यो फिल्मका निर्देशक सुजित सरकार हुन् । यी तिनै सुजित हुन् जसले आयुष्मानको पहिलो फिल्म ‘विक्की डोनर’ तथा ‘पिकु’ र ‘पिंक’ को निर्देशन गरेका थिए । यो फिल्ममा बच्चन र खुराना पपेट पात्रका रूपमा देखिने छन् । त्यसपछि आउनेछ गत वर्षको हिट ‘शुभ मंगल सावधान’ को सिक्वेल ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’ । यसमा भने उनी गे युवाका रूपमा देखिने छन् । ‘बाला’ जस्तै यसमा पनि उनको साथ भूमि पेडनेकर हुनेछिन् । आयुष्मानका आउने फिल्मको छोटो कथा र निर्देशकहरू हेर्दा यी सबै गम्भीर किसिमका फिल्म देखिन्छन् । विषय गम्भीर भए पनि आयुष्मानका प्रायः फिल्मको प्रस्तुति हास्य रहने भएकाले यिनले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार पनि गर्ने गरेका छन् । तीन खान, अक्षय कुमार र अजय देवगनका फिल्मको बजेट नै निकै धेरै हुने भएकाले सानो प्रोजेक्टमा यिनलाई लिनै मुस्किल पर्छ । यस्तोमा गतिलो विषयवस्तु भएका फिल्म आयुष्मान, विक्की वा राजकुमारकै पोल्टामा पर्ने गरेका छन् । ठूलो बजेटका धुमधडाकावाला फिल्ममा मात्रै देखिन थालेकाले ठूला स्टारहरूले आमदर्शकमा आफ्नो छाप बिस्तारै गुमाउँदै गएका छन् । यसैले बेलाबेला ऋत्विक रोशनजस्ता स्टार ‘सुपर ३०’ जस्ता फिल्ममा आउँछन् । अजय देवगन ‘रेड’ र अक्षय कुमार ‘स्पेसल २६’ मा ।
राष्ट्रवादको गफ र खोक्रा कमेडीको बीचमा मनोरञ्जक सिनेमालाई जोगाउने काम अहिले बलिउडमा आयुष्मानजस्ता अभिनेताले नै गरिरहेका छन् । जसका फिल्ममा आजको समाज र आजका युवाको समस्या पनि हुन्छ, साथमा मनोरञ्जक पनि हुन्छन् । यसैले त समीक्षकहरूले नयाँ आउने अभिनेताहरूलाई भन्न थालेका छन्– आयुष्मान भवः ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १२:२४
हलिउडका 'मास्टर ब्लास्टर' क्विन्टन टरेन्टिनो आफ्नो जीवनमा जम्मा १० वटा मात्रै फिल्म बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनको नवौं फिल्म ॅवन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’ कस्तो छ त ?
भाद्र ६, २०७६ हेलो शुक्रबार
एउटा टीभी स्टार छ, आफ्नो करिअरको शिखरबाट ओर्लिंदै गरेको  ।
एक जमानामा घरघरमा लोकप्रिय टीभी कार्यक्रमको यो स्टारको स्थिति अहिले निकै खस्किइसकेको छ । ६ महिना इटालीका ‘वेस्टर्न’ मा अभिनय गरेकी इटालीकी श्रीमतीसमेत लिएर आएको रिक डाल्टन । लस एन्जलसको सेलिब्रिटी थुम्कोमा रहेको यसको घरमा एक रात ठूलो घटना हुन्छ ।
अर्को छ अमेरिकी सेनाको पूर्वसिपाही । केही युद्धमा समेत भाग लिएको यो ‘वार भेट्रान’ को अहिलेको काम हो, रिक डाल्टन (लियोनार्डो डिक्याप्रियो) को स्टन्टम्यान । फिल्म स्टारले पर्दामा अनेक डरलाग्दा स्टन्ट गरेको देखिए पनि खासमा त्यो तिनले गरेका हुँदैनन् । उनीहरूकै जस्तै रूप, रंग र लुगा लगाएर स्टन्टम्यानले गर्छन् । रिकको स्टन्ट डबल छ, क्लिफ बुथ (ब्राड पिट) ।
तेस्रो पात्र छे, फिल्म अभिनेत्री । भर्खरै फिल्म करिअरमा उक्लिँदै गरेकी, विश्व प्रसिद्ध निर्देशक रोमन पलन्सकीसँग बिहे गरेकी । आफ्नो
सुन्दरता र अभिनयका लागि हलिउडमा नाम कमाउँदै गरेकी गर्भवती स्यारोन टेट (मार्गो रोबी) संयोगले स्टार रिकको छिमेकी हुन आउँछे ।
हलिउडका ‘मास्टर ब्लास्टर’ क्विन्टन टरेन्टिनोको नवौं फिल्म ‘वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’ का ती मुख्य पात्र हुन् यी । ‘पल्प फिक्सन’, ‘किल बिल’, ‘ज्यांगो अनचेन्ड’, ‘इन्ग्लोरियस बास्टर्ड’ जस्ता फिल्मका निर्देशक क्विन्टनले जीवनभरिमा जम्मा १० वटामात्र फिल्म बनाउने घोषणा गरेका छन् । अब उनले एउटामात्र फिल्म बनाउनेछन् ।
‘वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’ लाई क्विन्टनले हलिउडलाई लेखेको प्रेमपत्र भनिएको छ । लस एन्जलसमै हुर्केबढेका क्विन्टनले सन् १९६९ को दुई दिनमाथि यो कथा आफैंले लेखेका हुन् । ‘नाइफ इन अ वाटर’ बनाएर विदेशी भाषाको ओस्कर मनोनीत भएपछि हलिउड सरेका पोलन्सकी फिल्म बनाएर बेलायत गएका बेला उनको टोलमा हमला हुन्छ । यही छ कथाको ट्विस्ट । ‘म्यानसन फ्यामिली’ का रूपमा कुख्यात एउटा समूह थियो । हिप्पी र अपराधीको मिश्रणजस्तो यो समूहले केही सेलिब्रिटीहरूमाथि हमला गरेको थियो । यिनको अड्डामा क्लिफको एउटा सिंगै सिक्वेन्स छ । जो फिल्मको हिंस्रक क्लाइमेक्ससँग जोडिन आइपुग्छ ।
फिल्ममा केही वास्तविक पात्र छन् भने केही काल्पनिक । ‘चाइना टाउन’ र ‘द पियानिस्ट’ जस्ता फिल्म बनाउने पोलन्सकी यसका वास्तविक पात्र हुन् । उनकी गर्भवती पत्नी अभिनेत्री स्यारोनको सन् १९६९ को त्यो रात साँच्चिकै हत्या भएको थियो । तर, फिल्म यही घटनामाथि मात्रै आधारित छैन । फिल्मले एउटा स्टार र उसको स्टन्टम्यानको सम्बन्धलाई पनि देखाउँछ । जुन फिल्मकै अनुसार ‘साथीभन्दा अलि बढी, श्रीमतीभन्दा अलि कम’ छ । हलिउड कसरी चल्छ ? यसको शक्ति र सत्ता संरचना कस्तो हुन्छ ? त्यसबेलाका स्टारको जीवन कस्तो थियो ? यी सबै कुरा फिल्ममा छन् । टरेन्टिनोले सत्य घटनाहरूलाई लिए पनि तिनलाई काल्पनिक जसरी प्रस्तुत गरेका छन् । जस्ताको तस्तै देखाएर डकुमेन्ट्री बनाउनेतिर उनी लागेका छैनन् । फिल्मको ट्रेलर आएदेखि नै ब्रुस लीबारे चर्चा सुरु भएको थियो । फिल्ममा ब्रुस ली जम्मा एक दृश्यमा छन्, जसमा उनलाई भरमार उडाइएको छ । ब्रुस लीलाई घमण्डी त देखाइएको छ नै साथै स्टन्टम्यान क्लिफका अगाडि ब्रुस ली केही थिएनन् भन्ने पनि देखाइन्छ । जबकि संसारभर मार्सल आर्टमा ब्रुस ली धेरै ठूलो नाम हुन् ।
संसारको सबभन्दा ठूलो फिल्म उद्योग हलिउड । त्यसका सबभन्दा प्रभावशालीमध्येका एक निर्देशक र अहिलेको समयका दुई सबभन्दा ठूला सुपरस्टार । यो फिल्मको चर्चा हुनु नै थियो । २५ वर्षअघि क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा टरेन्टिनोको ‘पल्प फिक्सन’ प्रिमियर गरिएको थियो । १० वर्षअघि ‘इन्ग्लोरियस बास्टर्ड’ र यसपालि ‘वन्स अपन...’ । कोरियाको फिल्म ‘प्यारासाइट’ ले पाम दि ओर उडाएको फेस्टिभलमा टरेन्टिनो खाली हात फर्किए पनि यो फिल्मले भने थिएटरभरि दर्शक पायो । टरेन्टिनोलाई हलिउडमा आफैंमा एक ‘जनरा’ मानिन्छ । यो जनरा मन पराउनेका लागि ‘वन्स अपन...’ छुटाउनै नहुने खुराक हो ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ११:४०